नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्याे, नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ : डा. चन्द्रमणि अधिकारी - Himali Patrika
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्याे, नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ : डा. चन्द्रमणि अधिकारी
हिमाली पत्रिका २८ बैशाख २०७८, 8:10 pm
काठमाण्डाै – गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकाे भन्दै स्वास्थ्य नीति परिर्वतन गर्न सुझाव दिनुभएको छ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले मङ्गलवार काठमाण्डाैभित्र भएका डेडिकेटेड कोभिड अस्पतालका प्रमुखसँग गरेको छलफलमा डाक्टर अधिकारीले स्वास्थ्य प्रणाली धान्नै नसक्ने अवस्थमा पुगेकाे बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो हेल्थ सिस्टम धान्नै नसक्ने अवस्था भइसकेको छ । यसको उदाहरण मेरो अस्पतालको दिन्छु । हामीलाई नेपाल सरकारले तिमी मुटुको बिरामी हेरिदेऊ र मुटुका बिरामीलाई यदि कोभिड लाग्यो भने त्यसको जिम्मा लेऊ भनेकाे छ र म अहिले पनि लिन सक्छु । तर अर्को हस्पिटलले कोभिड मात्रै भएका बिरामीलाई जिम्मा लिइदिओस् ? तर कसैले पनि जिम्मा लिन सक्दैन अहिले । किनभने हाम्रो सिस्टम कोल्याप्स भइसकेको छ । हामीले जति बेड बनाउनुपर्ने हाे त्यो बेड बनाउन सक्ने अवस्थामा नै छैनौँ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडको पहिलो वेभ आएको बेलामा नै सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालका निर्देशकलाई बोलाएर कति बेड व्यवस्थापन गर्न सक्छौ भनेर भन्नुपर्थ्याे । बेड व्यवस्थापन गर्ने कुरा एक दिनको कुरा होइन । म दुःखका साथ भन्छु, वीर अस्पतालको पाँच सय शय्या छ तर सञ्चालन गर्न नसक्नु लाजमर्नुको अवस्था हो । हामी के हेरेर बसिरहेका छौँ ? हाम्रा बिरामी इमर्जेन्सी बाहिर बसिरहेका छन् । पाँच सय शय्याकाे वीर अस्पताल टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने । यसको जिम्मा कसले लिने ? यो मिटिङ एक वर्ष अगाडि सुरु गर्नुपर्थ्याे ।’
उनीहरूले भेन्टिलेटर, आईसीयू, एचडीयूकाे सङ्ख्या बढाउँदै लगेको भए पनि अहिले ती सबै बिरामीले भरिएको भन्दै बेडको सङ्ख्या वृद्धिसँगै जनशक्तिको भार पनि थपिने भएकाले आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सके महामारीविरुद्ध काम गर्न सहज हुने बताए ।